အပျိုကြီး လူပျိုကြီး ဖြစ်နိုင်ခြေ များသော လက္ခဏာ (၈) ရပ်” ( ငှက်ပျောတုံး နဲ့ နှစ်ပါး မသွားချင်သူများ ဆောင်ရန် ရှောင်ရန်) – Myanmar
October 29, 2020 admin Life Style, Relationship 0
လူတော်တော်များများကတော့ တစ်သက်လုံး FA ဘဝ နဲ့ နေသွားရမှာကို စိုးရိမ်လေ့ ရှိကြပါတယ်။ Singleဘဝကို ပျော်တဲ့ လို့ ပြောတဲ့သူတွေ ရှိပေမယ့် များသောအားဖြင့်တော့ အတွဲတွေမြင်ရင် မသိစိတ်ထဲကနေ အားကျ တတ်ကြပါတယ်။
လူဆိုတာလည်း ရှုပ်ထွေးပွေလီ ဒုက္ခများတဲ့ ဘဝကို မသိစိတ်က ကြိုက်တတ်တဲ့ အမျိုးပါ။ တစ်ချို့ တကယ်ကို Single ဘဝနဲ့ပဲ ပျော်တတ်တဲ့ သူတွေလည်း ရှိပါတယ်။
သင်ရော တစ်သက်လုံး Single အဖြစ်နဲ့ နေသွား မှာလား? အောက်ပါ လက္ခာဏာရပ်တွေ သင့်မှာ ရှိနေရင်တော့ သင်တစ်သက်လုံး Singleအဖြစ် နေထိုင်သွားရဖို့များပါတယ်။
(၁) သင်ဟာ သင့်ဘဝထဲကို လူအသစ်တွေ သိပ်ပေး ဝင်လေ့ မရှိဘူး။
သင့်အနေနဲ့ အသစ် တစ်ယောက်ယောက်နဲ့ အရမ်း ရင်းနှီးမှာကို လိုလားလေ့ မရှိပါဘူး။ သူစိမ်းတစ်ယောက် ယောက်က ပြုံးပြရင်တောင် သင်ဟာ ရှက်သလိုလို၊ ကြောက်သလိုလိုနဲ့ ပြန်ပြုံးမပြပဲ ရှောင်လွှဲ ထွက်သွားပါလိမ့်မယ်။
(၂) သင်ဟာ လက်တွဲဖော်နဲ့ ပက်သက်ပြီး အရမ်းကို မျှော်မှန်း ထားတယ်။
တကယ်တော့ လက်တွဲဖော် နဲ့ ပက်သက်ပြီး စိတ်ထဲ မှာ မျှော်မှန်းချက်လေးတွေ ရှိတာ ကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘယ်သူ့မှာမှ မရှိနိုင်တဲ့ အရည်အချင်းမျိုးနဲ့ လက်တွဲဖော် သို့မဟုတ်၊ လူတစ်သန်းမှာ တစ်ယောက်လောက်ပဲရှိနိုင်တဲ့ အရည်အချင်းမျိုးနဲ့ လက်တွဲဖော်ကို သင်မျှော်လင့်နေ ရင်တော့ ဒီတစ်သက် Single ဖြစ်ဖို့ များပါတယ်။
(၃) သင်ဟာ နေရာသစ်တွေ ကို သွားလေ့မရှိသလို အသစ်သစ်သော အရာတွေကို လည်း လုပ်လေ့မရှိဘူး။
သင့်ရဲ့အားလပ်ချိန်တွေမှာ အိပ်ရာထဲ လှဲပြီး ရုပ်ရှင်တစ်နေကုန် ထိုင်ကြည့်မယ်။ အပြင် ကို မသွားပဲ အိမ်ထဲမှာပဲ အချိန်ပြည့် အောင်းနေလေ့ရှိပြီး သူငယ်ချင်းတွေက တစ်နေရာရာ သွားဖို့ခေါ်ရင်လည်း သင် ငြင်းပါလိမ့်မယ်။
(၄) သင်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ အရာတွေကို မျှဝေရမှာ တွန့် တိုလေ့ ရှိတယ်။
သင်ပိုင်တဲ့ အိပ်ရာပေါ်မှာလည်း ဘယ်သူ့ကိုမှ ပေး မအိပ်စေချင်ဘူး။ သင့်ရဲ့ကမ္ဘာလေး ထဲက ဘယ်လိုအရာကိုမှ သူများနဲ့ မျှဝေ ခံစားချင်လေ့ မရှိဘူး။
(၅) သင့်ကို သူငယ်ချင်းတွေက ပျော်ပွဲ ရွှင်ပွဲ ပါတီတွေ မဖိတ်တော့ဘူး။
သူတို့က သင့်ကိုမခင်လို့တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ သင်ဟာ လူတွေ အများကြီး နဲ့ ကသိကအောက် ဖြစ်တတ်မှန်း သိတာက တစ်ကြောင်း၊ ပါတီဆိုတဲ့ အရာနဲ့ ရုပ်တည်ကြီးနဲ့ အေးတိအေးစက် မျက်နှာ အမူအရာမျိုးနဲ့ မလိုက်ဖက်တာက တစ်ကြောင်း မဖိတ်တာပါ။
(၆) သင်ဟာ သင့်ရဲ့အဆက်ဟောင်း ကို မမေ့နိုင်ဘူး။
သင်ဟာ သင့်ရဲ့အဆက်ဟောင်းကို မမေ့နိုင်ရုံ တင်မကပဲ နေ့တိုင်းလည်း သူ့ရဲ့အကောင့်ကို ဝင်ကြည့်တာမျိုး အရင်တုန်းက Message တွေ ပြန်ဖတ်တာမျိုး တစ်နွေ့နွေ့တစ်အုံအုံ နေ့တိုင်း ခံစားနေတတ်ပါတယ်။
နောက်ပြီး သင်ဟာ သူမပါပဲ လည်း ပျော်ရွှင်နေကြောင်း ဟန်ဆောင်ပန်ဆောင် Status တွေ ခဏခဏ တင်နေပါလိမ့်မယ်။ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ သူဝင်ကြည့်ရင် တွေ့အောင်ဆိုပြီးပါ။ ဒါပေမယ့်လည်း သူကဝင်ကြည့်ဖို့ ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်သလောက်ပါ။
(၇) အသစ်တစ်ယောက်က သင့်ကို ချဉ်းကပ်လာတိုင်း အရင် တစ်ယေက်နဲ့ နှိုင်းယှဉ်လေ့ ရှိတယ်။
အရင်တစ်ယောက်ကို စံထားပြီး ချဉ်းကပ်လာတဲ့သူတွေကို အမြဲ တိုင်းတာနေ ပါလိမ့်မယ်။ သင့်ရဲ့အရင်တစ်ယောက် ပေးသွားတဲ့ ဒဏ်ရာကိုတော့ မသိသလို ဟန်ဆောင်ပြီး အမြဲ အဲ့ဒိတစ်ယောက်နဲ့ပဲ တိုင်းတာ နေပါလိမ့်မယ်။
(၈) သင်ဟာ လှဖို့ ပဖို့ အပြင်းကြီးတယ်။
သင်ဟာ ရည်းစားတစ်ယောက်ရဖို့ မိမိကိုယ်ကို ဂရုမစိုက်ချင်တဲ့ သူမျိုးပါ။ သင်ဟာ အဲ့ဒိလို အလှအပတွေပြင်မယ့် အစား အိပ်မယ်၊ စားမယ်၊ သို့မဟုတ် အလုပ်ပဲ လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ လူစားမျိုးပါ။ တစ်နေ့နေ့ သင့်ရဲ့ အရှိအတိုင်းကို ချစ်နိုင်မယ့်သူ ပေါ်လာကောင်း ပေါ်လာမှာပဲ ဆိုပြီး စောင့်နေ ပါလိမ့်မယ်။
အထက်ပါအချက်တွေ သင့်မှာရှိနေပြီလား? မစိုးရိမ် ပါနဲ့။ သင်သေချာ ပြန်စဉ်းစားပါ။ သင်ဟာ တစ်ယောက်ထဲ နေရတာ ပျော်တာ သေချာရင် လွတ်လွတ်လပ်လပ်သာ နေပါ။
ဒါပေမယ့် သင့်တစ်ဘဝလုံးကို တစ်ယောက်ထဲ ဖြတ်သန်း ရဖို့ ကြောက်နေတယ်ဆိုရင် (မညာပါနဲ့။ မသိစိတ်ကို ပြန်မေးကြည့်ပါအုံး) တော့ အထက်ပါ အချက်တွေကို ပြင်ဆင် သင့်ပါတယ်။
၅ နှစ်ကလေး လည်ချောင်းထဲ နာကျင်မှုဒဏ်ကို နှစ်ချီခံစားနေရလို့ ဓာတ်မှန်ရိုက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါ